Ithegi: torbit | Martech Zone
NgeCawa, ngoMatshi 26, 2017 NgeCawa, ngoMatshi 26, 2017 Douglas Karr
Sibhale kancinci malunga nezinto ezichaphazela ukubanakho kwakho ukulayisha ngokukhawuleza kwiwebhusayithi kwaye sabelane ngendlela isantya esithe chu esilimaza ngayo ishishini lakho. Ndiyamangaliswa ngokunyanisekileyo linani labathengi esidibana nabo abachitha ixesha elininzi kunye namandla ekuthengiseni umxholo kunye neendlela zokukhuthaza- konke ngelixa bezilayisha kumamkeli ongezantsi kunye nesiza esingakulungiswanga ukulayisha ngokukhawuleza. Siyaqhubeka nokujonga esethu isantya sendawo kwaye
Indawo ilayishwa kancinci. Andikwazi ukukuxelela ukuba mangaphi amaxesha endiwufumene lo myalezo kule minyaka idlulileyo xa ndisebenza nabaxhasi. Isantya sendawo sibaluleke ngokungaqhelekanga… sinokunciphisa ii-bounces, ukugcina iindwendwe zibandakanyekile, ukufumana indawo yakho ibekwe ngcono kuGoogle, kwaye ekugqibeleni kukhokelele kuguquko olungakumbi. Siyazithanda iisayithi ezikhawulezayo… yenye yezinto zokuqala esihlasela ngazo nomthengi (kwaye nokuba kutheni sisindleka iWindowsPress kuFlywheel- lilungu